Barcelona oo isha ku haysa laacib u ciyaara Lazio – Gool FM
Barcelona oo isha ku haysa laacib u ciyaara Lazio
Liibaan Fantastic December 12, 2017
Lazio's forward Luis Alberto Romero Alconchel from Spain celebrates after scoring during the Italian Serie A football match Genoa Vs Lazio on April 15, 2017 at the 'Luigi Ferraris Stadium' in Genoa. / AFP PHOTO / Marco BERTORELLO (Photo credit should read MARCO BERTORELLO/AFP/Getty Images)
(Barcelona) 12 Dis 2017 Barcelona ayaa isha la raacaysa laacibka qadka dhexe uga ciyaara kooxda Lazio ee Luis Alberto.
Agaasimaha ciyaara kooxda Barcelona ayaa la socday xaalka 25 jirka reer Spain 3-dii bilood ee ugu danbaysay sida ay baahisay Mundo Deportivo.
Wuxuuna daawaday kulankii u danbeeyay ee Lazio looga adkaaday 3-1, Luis Alberto ayaana dhaliyay goolka kaliya ee Lazio ay ka dhalisay kulankaas.
Luis Alberto ayaa soo bandhigaya qaab ciyaareed fiican, Barcelona ayaana ku wargalisay dadka u dhaw xiddigaan inay si fiican ula socdaan hormarkiisa si kooxdu ay ula wareegto dhamaadka xiliciyaareed kaan.
Luis Alberto ayaa u dhaliyay Lazio 5-gool isaga oo caawiyay 8-kale xiliciyaareed kaan.
“Qaladka isaga malahan ee waxaa leh Real Madrid.”.- Laacib ka tirsan Barcelona oo difaacay Cristiano Ronaldo
Real Madrid oo saxiix wayn ka raadinaysa horyaalka ingiriiska